Maxaad kala socotaa khatarta Somalia uga imaan karta saldhiga Berbera? - Caasimada Online
Home Warar Maxaad kala socotaa khatarta Somalia uga imaan karta saldhiga Berbera?
Maxaad kala socotaa khatarta Somalia uga imaan karta saldhiga Berbera?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa sii kordhaaya walaaca laga qabo dhismaha Saldhiga cusub ee uu Imaaraadka carabta kawado magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, QM ayaa aad uga walaacsan in dowlada Imaaraadka ay Somalia ka dhaqangaliso Suuqyo lagu kala iibsado Hubka noocyada kala duwan leh.